Maansada: Dulun Islaax! | KEYDMEDIA ONLINE
Maansada: Dulun Islaax!
Bashiir M. Xersi — Sida magaca maansadaba ka muuqata, waxay ku wajahan tahay Ururka Al Islaax, faraca Ikhwaanka Masar, oo Soomaaliya meelo badan ka dhisan xarumo iyo xalqooyinna ku leh.
Maansadu waxay daba socotaa, ka dib markii ay dhaleecayn iyo buuq ku fureen mudane Xasan Sheekh oo dalka Masar uga qaybgalay xaflad caleemmo saara ah, oo lagu maamuusayey Madaxweyne C/fattah Khalil al-Sisi.
Waxaa la yaab ah waxa dal kale ka dhacay, maxaa naga galay, keennii ayaan u tabar la’ nahaye? Ta kale, casuumad loo fidiyey madaxda dawladda, ma waxay u diidayaan in xubin Ikhwaan ah xiran yahay, horeba madaxweyne ha u soo noqdee? Yaab.Horudhaca idin ku dheerayn mayee, maansadii waa tane shifa ku af saara.
Gabay ugub ah curintii
Waa taan ayaan hore
Eray kooban iga hoo.
Inyar dhagaha ii fura
I amaahsha maqalkiin
Aan ISLAAX warkoodiyo
Ila arag bal aragtida
Indhaha ku kala bixi.
Aqli iyo garaad iyo
Xiska iyo ogaalkiyo
Libintaa aqoon ehe
Mar hadday aqool wadan
Kaba daran abaaraha.
Xasan waxaad ku eeddeen;
Ma itaal darraan baa
Ma idaara xumabaa
Ma ilbaxnimo yaraanbaa
Mise waa ISLAAXNIMO?.
Ma inuu asaaggii
Ka aqbalay farriinoo
Isagoo metela adi
Mursi iyo Alsiisiyo
Kay eryeen dorraadiyo
Kuwa iilka gelayee
Anwar iyo Jamaalba leh
Ehelnimo walaal iyo
Ma mid idin xigaa jira
Ab miyaad wadaagtaan
Abtirkiinna maa gala?
Islaannimo midkii u dhaw
Ma taqaan Adeeroow?.
Haygu oomin murankood
Ha asqeyn dadweynaha
Inqilaab hadduu dhacay
Maxaa adiga kaa galay?
Ma adaa Masaari ah
Mise waa ISLAAXNIMO?
Murshid kuu iftoodoo
Kula galay ISLAAXOW
Umddaydu may lahan
Ha ambane ISLAAXOW
Iba bixi xornimadoo
Ka soo cesho ISLAAXNIMO!
Dal ajnabi ka kaalaye
Haw arrimin adiguye
Isirkaagu waa kee?
Horta kaagu unug iyo
Ma leeyahay ammuurahan;
Askar iyo nidaam iyo
Agab iyo shaqaaliyo
Garan waayey aniguye
Ayaandarro ka weyn iyo
Aayo xumo ka daran iyo
Aqoonyahan ka liitaa
Abid nooma soo kicin.
Ammaan iyo xumaan iyo
Ilaaq iyo asluub iyo
Edeb iyo xadgudub iyo
Aabi iyo wanaagnaan
Aadanaha waxaa haga
DHAQAN waaye ma ogtahay?.
Ha illaawin waayaha
Wixii umadda soo maray
Maan arag wadaad samo
Nagu ababsho waanoo
Albaab khayr leh noo fura!
Inaad ubadka dubataan
U abaabushaan dirir
Jihaad beena amartaan
Janno ebera sheegtaan
Ayaa lagu asteeyaa.
Aqris jaban xujaahoo
Aan INSAANKU dheef iyo
Ashqaraarba kaba helin
Ebteliyo qax mooyiyo
Dhib inuu abuuree
Laga waa IXSAAN qoran.
Iska daaya eexdee
Asaraar u guur baa?!
Urur beena sheegtoo
Kala qaybsha umaddeee
Maxaa loo abaal dhici?.
Urduf yahow ardaalkaa
Lagu laayo inammada
Afku saw ka kaa xiran
Aamus iyo agnaannimo
ISLAAX uu ku caan yahay
Uurka aad ka dabateen
Nacayb maaha aragtidu
Eel iyo dhimaal iyo
Eed aan ku socon qodob!
Ha degdeg ISLAAXOOW
Waa hadal Abwaanoo
Aan inkaar la soconoo
Marna lagu irdhoobayn.
ISLAAXOOW burhaan iyo
La imaaw daliiloo
Afkaarteedu socon mee
Ka ilaali xagjirkiyo
Wax walboo la eersado.